Xirfad -barista ESOL ma tahay dariiqa saxda ah? 2022
October 14, 2021 Okpara Francis
Xirfad -barista ESOL ma tahay dariiqa saxda ah?
Ma ku dhowdahay inaad qalinjabiso laakiin ma garanaysid waxaad samayso? Ama laga yaabee inaad qalin jabisay laakiin aadan shaqo helin? Hadday haa tahay, markaa xirfadda waxbaridda ee ESOL ayaa noqon karta doorashada kuugu fiican. Warka weyn ayaa ah inaadan u baahnayn wax khibrad ah si aad u noqoto macallin xirfadle ah oo ESOL ah.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad u hurato ku dhawaad ​​120 saacadood oo wakhtigaaga ah si aad u dhammaystirto Barashada Ingiriisiga Koorsada Luqadda Labaad oo aad bilowdo kasbashada. Intaas ka dib, waxaad fursad u heli doontaa inaad ku safarto adduunka ama aad internetka ku barato Ingiriisiga.
Haddii aad la yaaban tahay haddii xirfadda waxbaridda ee ESOL ay tahay waddada kugu habboon, sii wad akhriska si aad u ogaato sababta ay tahay inaad u bilowdo barashada Ingiriisiga sidii luqad labaad.
Waa maxay Macallinka ESOL?
Aan ku bilowno fahamka macnaha ESOL. Macallin ESOL ahaan, waxaad fursad u heli doontaa inaad ka caawiso ardayda wax ka barata dhammaan asalkoodu inay bartaan Ingiriis qoran iyo ku -hadal labadaba. Waxa kale oo aad bari doontaa erayada dadka aan u dhalan, ku dhawaaqida, iyo naxwaha. Macallimiinta ESOL waxay sidoo kale siiyaan bartayaashooda kalsooni ay ku isticmaalaan luqadda Ingiriisiga marka ay wada hadlayaan.
Barnaamijyada ESOL, oo ​​sidoo kale loo yaqaan Ingiriisiga Ku -hadlayaasha Afafka Kale, waxay diiradda saaraan ereyada wada -hadalka, naxwaha, iyo erayada. Markaad noqoto macallin ESOL, waxaad ku bari doontaa dadka aan u dhalan barnaamijyada bulshada, kulliyadaha bulshada, iyo aaladaha internetka.
Sida Loo Noqdo Macalin ESOL?
Waxaa jira dhowr waddo oo aad mari karto si aad u noqoto macallin ESOL oo shahaado haysta. Marka hore, waxaad ku qaadan kartaa Baridda Ingiriisiga sidii Luuqad Shisheeye (TEFL) barnaamijyada kulliyadda ama xarumaha tababarka gaarka ah. Barnaamijyada TEFL ee ugu caansan waa Shahaadada Kulliyadda Trinity London iyo Shahaadada Cambridge ee Luqadda Ingiriisiga Barista Dadka Waaweyn.
Haddii aad go'aansato inaad qaadato mid ka mid ah koorsooyinkan, waa inaad diyaar u ahaataa inaad geliso ugu yaraan 130 saacadood oo xiriir ah iyo ilaa lix saacadood oo ah barashada la arkay.
Haddii kale, waxaad ku noqon kartaa macallin ESOL shahaado jaamacadeed ama shahaado sare. Loo -shaqeeyayaasha qaarkood waxay kaliya shaqaaleeyaan macallimiinta ESOL oo leh shahaadooyinkan. Jaamacaddu waxay filan kartaa inaad haysato laba illaa saddex heer A ama u dhigma si aad ugu qalanto shahaadada. Haddii aad rabto inaad iska qorto barnaamijka dib -u -dhigashada, waa inaad shahaado ku leedahay goob kasta.
Intee in le'eg ayay kasbadaan Macallimiinta ESOL?
Mushaharka macallinka ESOL wuxuu ku kala duwan yahay waddanka, khibrad, gobol, iyo shahaadooyin. Waxaad guriga u qaadan doontaa wax kasta oo ah $ 2,000 illaa $ 6,000 bil kasta haddii aad nasiib u yeelato inaad fursad ka hesho mid ka mid ah waddammada lacagta badan bixiya. Tusaale ahaan, macallimiinta ESOL ee UAE waxay guriga u qaataan in ka badan $ 3,500 bil kasta.
Dhanka kale, waxaad Japan ka kasban doontaa wax ka badan $ 2,200 bishii iyo ugu yaraan $ 3,000 gudaha Saudi Arabia.
Haddii aad wax ku barato ardayda Kuweyt, waxaad filan kartaa inaad sameyso wax ka badan $ 2,600 bil kasta. Macallimiinta ESOL ee Cumaan ayaa sameeya wax ka badan $ 2,000, halka Kuuriyada Koonfureed ay ka dhigto qiyaastii $ 1,600. Ugu dambayn, macallimiinta ESOL ee Shiinaha ayaa bishii heli kara ku dhawaad ​​$ 1,400.
Maxaad Maanta U Noqonaysaa Macalin ESOL
Barashada Ingiriisiga oo ah luqad labaad waxay la timaaddaa faa'iidooyin badan. Marka laga reebo mushaharka abaal -marinta ah, waxaad sidoo kale fursad u heli doontaa inaad ku soo wareegto adduunka. Iskusoo wada duuboo, waxaad baran doontaa barayaashaada xirfado Ingiriis oo muhiim ah oo kor u qaadi doona noloshooda. Soo ogow sababta aad ugu noqon lahayd ESOL hoosta:
Way kuu fiican tahay haddaad bilowdo
Sida lagu sheegay sahan dhowaan la sameeyay, 71% loo-shaqeeyayaashu waxay doorbidaan musharraxiin aqoon iyo waayo-aragnimo u leh musharrixiinta heerka gelitaanka. Dheeraad ah, in ka badan 50% loo -shaqeeyayaasha la wareystay waxay sheegeen inay doorbidaan musharraxiinta leh waayo -aragnimo shaqo -barasho. Sidaa darteed, way adag tahay in la helo xirfad abaalmarin leh haddii aad bilowdo.
Nasiib wanaag, waxaad isla markiiba bilaabi kartaa kasbashada haddii aad go'aansato inaad noqoto macallin ESOL. Si ka duwan shaqooyinka kale, loo -shaqeeyayaasha badankoodu ma filayaan in macallimiinta ESOL leeyihiin khibrad aad u badan. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan doontaa inaad khibrad u yeelato si aad u hesho fursado badan oo abaalmarin leh. Warka fiicani wuxuu yahay inaad bilaabi doonto dhisitaanka khibradaada markaad shaqo bilowdo.
Haddii aadan diyaar u ahayn inaad ka tanaasusho hab -nololeedkaaga reer -guuraaga ah ee dhijitaalka ah, markaa u shaqaynta macallin ESOL waa wax ay tahay inaad tixgeliso. Adigoo ah macallin ESOL, waxaad ka shaqayn kartaa meel kasta oo adduunka ah ilaa intaad leedahay xiriir internet deggan. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad raacdaa jadwalkaaga oo aad u diyaarisaa fasallada si aad ardaydaada ugu siiso qiime lacagtooda.
Ku shaqaynta macallin ESOL waxay ku siin doontaa xorriyadda inaad ku safarto adduunka. Qaar ka mid ah waddamada aad uga shaqayn karto macallin ESOL waxaa ka mid ah Japan, Spain, Vietnam, South Korea, iyo Mexico. Wanaagsan, waad ku bari kartaa waddan kasta illaa aad ka soo baxdo shuruudaha Visa.
Sababta kale ee ah inaad noqoto macallin ESOL waa inaad ka faa'iidaysato fursadaha shaqo ee kala duwan.
Adigoo ah macallin ESOL u qalma, waxaad yeelan doontaa xorriyadda inaad go'aan ka gaarto inaad Ingiriisida u dhigato luqad labaad waddan kasta. Intaa waxaa dheer, waad bari kartaa ardayda jinsi kasta iyo koox kasta. Sidoo kale, waxaad ku qaban kartaa casharradaada Ingiriisiga onlayn, xerooyinka xagaaga, ama xarumaha tababarka jirka.
Barashada Ingiriiska ee ajaanibta waxay kaa caawin doontaa inaad horumariso xirfaddaada, gaar ahaan haddii aad hadda qalinjabisay. Si aad u bilowdo, waxaad heli doontaa waayo -aragnimo qiimo leh markaad bilowdo barashada Ingiriisiga oo ah luqad labaad. Khibradaasi waxay noqon doontaa mid muhiim ah markaad go'aansato inaad raadsato waddo kale oo xirfadeed. Marka labaad, u safridda dalal cusub ayaa kaa saari doonta aaggaaga raaxada.
Waxa kale oo aad u badan tahay inaad noqoto xiriiriyaha iyo hoggaamiyaha wanaagsan marka aad guurto si aad u qaadato caqabadda ah inaad Ingiriisiga ku barato dhaqan cusub.
U shaqee sida Freelancer
Haddii aad ka daashay hab -nololeedkaaga maalinlaha ah, noqoshada macallinka ESOL ayaa ku caawin karta. Uma baahnid inaad u safarto si aad u barato Ingiriisiga dadka aan u dhalan. Halkii, waxaad ku bari kartaa Ingiriis dadka aan u dhalan internetka. Habkan, waxaad yeelan doontaa dabacsanaanta reer guuraaga dhijitaalka ah. Waxaad ku safri kartaa adduunka, waxaad baran kartaa luqad cusub, waxaad iska qori kartaa barnaamij shahaado oo cusub ilaa intaad qabanayso dhammaan fasallada jadwalkaaga ah.
Inaad noqoto macalin ESOL waxay kuu furi doontaa albaabyo iyo fursado badan. Waxa wanaagsan ayaa ah inaad bilaabi karto xitaa haddii aadan lahayn khibrad aad u badan.
Previous Post:Hagaha waxbarashada UK ee Leicester
Post Next:6 Faa'iidooyinka Helitaanka La -taliyaha Kulliyadda si uu uga gudbo Imtixaanka Ogolaanshaha